Uyayila ilebhile ndiza kwenza ilebheli yakho. Ndiyila iilebheli zenu, kwaye ndenze iilebheli zenu-alice | Alice
Abavelisi ababonelela ngegama leelebheli ezikumgangatho ophezulu
Ilebhile yentsimbi yentsimbi
Iibheji zelebheli ze-aluminium
Zinc ingxubevange Nameplate
Ilebhile ye-Eckel ye-ECKEL
Ukujonga apho iilebheli zentsimbi zikwi-alice
I-Wholedale i-Lifayili yeLeal Alice-Alice Alice ngexabiso elifanelekileyo - Alice
Izitikha zokuzincamathelisa ngokwakho zisetyenziswa ngokubanzi, zilungele zonke iindlela zokuhamba ngobomi
Ngokungqongqo ulawule umgangatho wendlela yokuqhubela phambili yensimbi yesiko
Uyayila ilebhile ndiza kwenza ilebheli yakho. Ndiyila iilebheli zenu, kwaye ndenze iilebheli zenu-alice
Uyila ileyibheli, ndiza kwenza ilebheli yakho. Ndiyila iilebheli zenu, kwaye ndenze iilebheli zenu-alice
Sebenzisa iibhokisi eziqinileyo ukupakisha ukuze uqiniseke ukuba bakhuselekile ngokwaneleyo.
Ukusukela ukumiselwa kwayo ngo-1998, uAlice wenziwe kwi-Meyil Conflet Alfats, enokuthi ivelise amanani aloweli, i-Aluminium ye-Aluminium, i-Staines Steeple, iNkampani, uyilo, imveliso, imveliso, imveliso, imveliso, imveliso, imveliso , Thenga, inkqubo yenkonzo, amalungelo okuthengisa, iPakethi yePakethi yePatent kunye nokuThengisa intengiso, indawo yezityalo ezikwiimitha ezingama-2 000, kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-100. Iimpawu zethu ziyanceda ngokwezifiso, sinokwenza iilebheli ngokwendlela oyilo, okanye iilebheli zoyilo ngenxa yenu ngokweemfuno zakho.
Imeyikhi yezahlulo zahlulwe zaza zaza: zensimbi kunye ne-metric.
Izinto zentsimbi: Ubhedu, i-Iron, i-Aluminium, iNickel, intsimbi engenanto, i-titanium, i-zinc.
Izixhobo ezingezizo ezingesosinyithi: I-ABS, PC, i-PVC, PVC, i-Pestiglass, iBhodi yemibala emibini kunye ne-Epoxy Retin, i-epoxy resin, i-silicone kunye nezinye amagama.
Kusekwe ngo-1998, uAlice ngumenzi wegama elikhethekileyo kwi-r&D, Uyilo, ukuvelisa, ukuthengisa, inkqubo yenkonzo, kunye namalungelo orhwebo. Inkampani igxile ekuboneleleni ngeenkonzo zokuxhasa ishishini lefanitshala, ishishini lomatshini, ishishini le-elektroniki nezamashishini kunye namanye amashishini. Ikakhulu ivelisa intsimbi engenasitali, i-titanium, ubhedu, i-aluminium kunye nolunye uthotho lweempawu ze-Hardware, iinkqubo zokuphelelwa, i-oxition, ipolishing, kwaye iphazamisa. Gulue. Kwangelo xesha, ikwabandakanyeka ekuvelisweni kwazo zonke iintlobo zezipho kunye nobugcisa, amakhadi egolide, iimpawu ezisasazayo, ininzi kakhulu Abasebenzi abayi-100, i-1,500 yeemitha zokunqongophala kwemveliso, kwaye ingenisa rhoqo izixhobo zemveliso zanamhlanje. Ukwenzela ukuba uhlangabezane neemfuno zokhuphiswano lwentengiso kwaye ulandele imeko yezoqoqosho, kwiminyaka yakutshanje, siphuhlise ishishini le-E-Commerce Remoreser e-E-Commer, eyenza inkqubela phambili kwaye iqhubela phambili.
Izixhobo ze-Audio, zasekhaya, iifriji, iikhompyuter, iimveliso zokhuseleko
Anti-A amanzi, Anti-Cratch, anti-umdaka, ukuphela,
I-5-8 unyaka ngokusetyenziswa okuqhelekileyo
Iimilo: Kungenxa yokuba iiprofayili ze-aluminium zinomjikelo wonke, kwaye zinamandla amakhulu okubhala, kwaye zinoyilo oluhle kakhulu, uyilo kunye nokudlala, kwaye ziyakwazi ukwamkela iimilo ezinzima. , Uyilo lwemibala eyahlukeneyo, kwaye inokuthwala umxholo ngakumbi.
Inkqubo yemveliso yePlaysi yeProfayile yeAluminium ilula kakhulu. Emva kokuba umyili ugqibe uyilo lokunikezelwa kwezinto ezikhoyo zomthengi, isixhobo esilomfuyo siyanqunyulwa size sibethwe ngokwendlela esemgangathweni, kwaye emva koko kumiselwa kuyilo. Ezi zinto zinokudityaniswa zize zihlangane ukuze zigqibe inkqubo yokwenziwa komqondiso, kwaye onke amalungu anokudityaniswa ngokwahlukeneyo.
Q: Ithini intlawulo yakho?
A: t / t 30% njengediphozithi, kunye ne-70% ngaphambi kokuhanjiswa. Siza kukubonisa imifanekiso yeemveliso kunye neephakeji Phambi kokuba uhlawule ibhalansi.
Q: Ukuba kufuneka ndibhatale indleko ze-sldld kwakhona xa siphinda siphinde siphinde siphinde?
A: Hayi, awudingi ukuhlawula isifo kwakhona, iya kusetyenziswa rhoqo.
Q: Njani malunga nemveliso kunye nexesha lokuhambisa?
A: Ixesha lesampulu ziintsuku ezingama-7-10 kunye nexesha lemveliso yobunzima malunga neentsuku ezili-15 emva kokuba umsebenzi wobugcisa uvunyiwe.
Q: Ngaba ungazenzela izinto ezenziwe ngokwezifiso, i-OEM okanye i-ODM?
A: IMITHETHO NGOKUGQIBELA IINTSAPHO ZABATHUTHA okanye imizobo yoyilo, ixabiso lenzelwe kuphela, inani kunye nobungakanani beemveliso zahlukile, ixabiso liya kwahluka.
Q: Ngaba ubonelela ngeesampulu? Ndingayifumana isampulu yasimahla?
A: Iisampuli kwisitokhwe zikhululekile kuwe ngaphandle kwe-right.Customed Imveliso nceda uqhagamshelane nathi ukuze uxoxe.
1.Oem okanye i-ODM yamkelekile.
2.Siyamkela i-odolo encinci / i-odolo yelinte yokugcina umthengi ukuba ijonge ukuba ngaba iimveliso zilungele intengiso.
3. Ingabakho i-Almot kwi-Almot kwi-intanethi kwiiyure ezingama-24 kwinkampani yakho ehlomezayo.
4.Sivuyela ukuva kuwe kungekudala kwaye uqalise ubudlelwane beshishini ngenkampani yakho ye-hoteem.
Nxibelelana ne-imeyile ye-imeyile: Intengiso03@alicelogo.com